Vaovao - Fantatrao marina ve ny mpampandeha fiara roa hetsika
Tena fantatrao ve ny polisy mpamindra fiara Dual action
1.Inona no atao hoe Dual Action Car Polisher?
Ny mpampandeha manao hetsika roa dia miavaka amin'ny fihetsiky ny loha. Mihodina eo amin'ny spindle afovoany izy io, ary mihodina manodidina ny offset eccentric ity spindle ity. Ny fanoharana tsara ho an'ny polisy manao hetsika roa dia ny boriborintany eto an-tany. Mihodina ny tany ary mihodikodina manodidin'ny masoandro koa izy. Ny Dual Action Polisher dia manadio, manosotra ary manosotra amin'ny fihetsiketsehana toy ny an'ny tanan'olombelona ihany amin'ny hafainganam-pandehan'olombelona! Ny valiny dia milina milamina tanteraka, tsy misy fironana "handositra" amin'ny mpandraharaha. Ny hetsika malama sy toy ny tanana dia miaro amin'ny fahasimban'ny toerana.
2.Nahoana no mifidy Dual Action Car Polishers?
Ny mpandoto hetsika roa dia hanatsara ny firafitra sy ny famirapiratry ny loko fiara tsy misy ahiana. Izy ireo no safidy mora indrindra ho an'ny vao manomboka sy matihanina, ary mamokatra vokatra tsara foana izy ireo. Afaka mitondra fahafinaretana ho anao izy ireo rehefa manome tsipiriany, ary manampy anao hitsitsy fotoana sy vola. D / A Polisher dia milina marobe. Azo ampiasaina amin'ny fanadiovana, famolahana ary fametahana savoka, famaranana farany amin'ny hafainganam-pandeha hafa.
3.Ahoana ny fiasan'ny Dual Action Car Polishers?
Dual Action Polisher dia mihodikodina amin'ny pad manodidina ny spindle afovoany raha mihodina amin'ny axis-ny ny pad.
Ny counterweight amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny spindle afovoany dia mampihena ny hovitrovitra ho an'ny fandidiana milamina. Ny hetsiky ny lohan'ny masinina antsoina hoe orbital dia manakana ny famoronana holograms (marika buffing symmetrical), fandoroana loko, ary endrika hafa amin'ny fahasimban'ny loko izay matetika mifandraika amin'ireo mpamily rotary haingam-pandeha sy ireo milina fanaovana buffing. Dual Action Polisher dia manafoana ny mety hanimba ny loko. Tena sariaka ho an'ny mpampiasa izy ireo.